ယောကျာ်းတွေ အသက်ရှည်ဖို့နဲ့ သစ္စာရှိဖို့. . . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယောကျာ်းတွေ အသက်ရှည်ဖို့နဲ့ သစ္စာရှိဖို့. . .
ယောကျာ်းတွေ အသက်ရှည်ဖို့နဲ့ သစ္စာရှိဖို့. . .
Posted by alinsett on Jan 28, 2015 in Creative Writing, Critic, History, My Dear Diary | 16 comments
မိန်းမတွေအသက်ရှည်ဖို့ ကင်းကင်းနေဆိုလို့ အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား
အမျိုးသမီးတွေ အသက်ရှည်ချင်ရင် အမျိုးသားတွေကို ဝေးဝေးရှောင်
အမျိုးသမီးတွေ အသက်ရှည်ချင်ရင် အမျိုးသားတွေကို ဝေးဝေး ရှောင်ရပါမယ်တဲ့။
စကော့တလန် နိုင်ငံမှာ သက်ရှိထင်ရှား အသက်အကြီးအဆုံး အမျိုးသမီးကြီး တဦးက ဘဝမှာ အသက်ရှည် ရခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာမှာ ဒီအချက်က အဓိက ဖြစ်တယ်လို့ huffington post.com သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြလာပါတယ်။
ဘယ်တုန်းကမှ လက်မထပ်ခဲ့ဘူးသော အသက် ၁၀၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Jessie Gallan ဆိုသူ အမျိုးသမီးကြီး က အသက်ရှည် ရခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဟာ ဆံပြုတ်စားခြင်းနဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ ကင်းကင်းနေဖို့ ပြောဆို လိုက်တာပါ။
သက်ရှည် ဖွားဖွား အပျိုကြီးမှာ မွေးချင်း အမျိုးသမီး ငါးဦး၊ အမျိုးသား တဦး ရှိခဲ့ပြီး ငယ်စဉ်ဘဝက ကောက်ရိုး ကို မွှေ့ယာ ခင်းအိပ်ကြရင်း ကြီးပြင်းခဲ့တာလို့ ဒေးလီးမေးလ် သတင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။
မိန်းမသားတွေအနေနဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ ကင်းကင်းနေခြင်းဟာ အသက်ရှည်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ပါတဲ့။
ယောက်ျားတွေ ဟာ သုခထက် ဒုက္ခသာ ပိုပေးတတ်သတဲ့။
Gallan ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ပုံမှန်လုပ်လေ့ ရှိပြီး နေ့စဉ် မနက်တိုင်း ဆံပြုတ်တခွက်သောက်ပါတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ သူဟာ လုံးဝ အိမ်ထောင်မပြုခဲ့ဖူးပါ ဘူးတဲ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် Gallan အသက် ၁၀၈ နှစ် ပြည့်တုန်းက အသက်ရှည်ဖို့ လျှို့ဝှက်ချက်ဟာ ဆံပြုတ်သောက် ဖို့ပဲ ပြောခဲ့ပြီး ယောက်ျားတွေနဲ့ ကင်းကင်းနေဖို့ မပြောခဲ့ဖူးလို့လည်း သတင်းက ဆိုထားပါတယ်။
အခုလို Gallan ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့ အမျိုးသားတွေကတော့ ဘဝင်ကျမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖိုးဖိုး သက်ရှည်
တွေရဲ့ အသက်ရှည်ခြင်း လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလည်း ဧရာဝတီဘလော့ဂ် ပရိသတ်တွေ သိချင် ကြားချင်ကြမှာပါ။
အခုတော့ ဖွားဖွား အပျိုကြီး Gallan ပြောခဲ့တာတွေကို ဗွီဒီယိုကနေလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကိုးကားချက် ။ ။ http://www.huffingtonpost.com/2015/01/20/secret-to-long-life-avoiding-men_n_6508870.html?ir=Canada+Living
(ဧရာဝတီ ဘလော့စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ )
သူငယ်ပြန်လို့ ပြောတဲ့ တွေ့ရှိချက်
ကမ္ဘာပေါ်က မိန်းမတွေတိုင်းဟာ ယောကျာ်းတွေနဲ့ ကင်းကင်းနေပြီး အပျိုကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲဗျာ ။
ဟုတ်တယ်လေ… ဘယ်မိန်းမက …အသက်ရှည်ရှည် မနေချင်လိမ့်မလဲ… ။
အကုန်လုံး အသက်ရှည်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ သွားပြီ။
ဒီဘဝ ဒီမျှနဲ့… အပျိုးကြီးတွေဖြစ်…
အိမ်ထောင်မှု သုခဆိုတာတွေ အလကားဖြစ်… သားသမီး မျိုးဆက်ဆိုတာတွေ ရပ်တန့်…
အိုး…တော်တော် … ကြောင်တောင်တောင် နိုင်တဲ့ တွေ့ရှိချက်ပဲဗျ ။
ဒီ အမျိုးသမီးကြီး… ဒီအချက်ကို တွေ့ရှိခဲ့တာ… ဒီအချက်အကြောင်း ပြောခဲ့တာ.. အချက်က မှန်ရင် မှန်..မမှန်ရင်.. သူ… ရူးလို့ ပြောတာပဲ ဖြစ်မယ်။
ဒါမှမဟုတ်… သူ … သူငယ်ပြန်ပြီး…တောင်စဉ်ရေမရတွေ ပြောတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
သူ့အချက်သာ မှန်ရင်…မှန်တယ်ဆိုပြီး.. ရှိသမျှ မိန်းမတွေက ယောကျာ်းတွေမှန်သမျှနဲ့ ကင်းကင်းသာ နေလိုက်ကြရင်…
ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မလဲ…..သိမပေါ့… ။
ဒါမယ့်… ကိစ္စ တစ်ခု မှားလား မှန်လားဆိုတာ.. လက်တွေ့စမ်းကြည့်ရရိုးထုံးစံရှိတယ်။
အဲဒီလို လက်တွေ့စမ်းတာမှာ… အချိန်ကာလ ကြာရှည်စွာ စမ်းသပ်ရတဲ့အခါ… ရလာမယ့် ရလဒ်က..အမှန်ဆိုရင်…ကိစ္စ မရှိဘူး ။
အမှားကြီးဆိုရင်တော့… နောင်တ အကြီးကြီး ရတော့မှာ… ။
ဆေးဝါးအသစ် စမ်းသပ် သုံးကြည့်သလိုပဲပေါ့… ။
လူကို မစမ်းသပ်ပဲ… အကောင်ပလောင်လေးတွေကို တိုက်ကြည့်တော့…
ဆေးက… ရလဒ်ကောင်းမယ်.. / သုံးလို့ ရမယ်ဆိုရင်တော့.. အကောင်ပလောင်လေးတွေအတွက်.. ဘာမှ မထိခိုက်မနစ်နာ…
ဆေးက ..သုံးစားမရလောက်အောင် ..မှားနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့.. .အစမ်းသပ်ခံ အကောင်ပလောင်လေးတွေရဲ့ အသက်….ဆုံးမယ်…
” မိန်းမတွေ အသက်ရှည်ချင်ရင် ယောကျာ်းတွေနဲ့ ကင်းကင်းနေရမယ်..” ဆိုပြီး..နေကြည့်လိုက်တာနဲ့….
အသက်ရှည် မရှည်က မသေချာဘူး..
သေချာတာကတော့… စမ်းသပ်ချိန် – ရပ်တန့်လိုက်ရတဲ့ လူ့ သဘာဝ အရွေ့အမျောရဲ့ သက်ရောက်မှုက ဒီအတိုင်း ကျန်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး ။
ထိုက်တန်တဲ့ သက်ရောက်မှုဆိုတာ ရှိတယ်။
ဒီတွေ့ရှိချက်ကို အမှန်ထင်ပြီး..လိုက်လုပ်မယ့် မိန်းမ ဆယ်ယောက် ရှိရင်…
အဲဒီ ဆယ်ယောက်ဟာ..လူသားမိန်းမ ဖြစ်တည်မှု – တာဝန် မယူလိုက်နိုင်ဘူး… ။
အဲဒီအတွက် ရလဒ် က…လာမယ်..။
အချုပ်ပြောရရင်တော့… ဒီဘွားတော်ကြီးပြောတဲ့ ”မိန်းမတွေ အသက်ရှည်ချင်ရင် ယောကျာ်းတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေ..”ဆိုတဲ့ အယူအဆကို
လုံးဝ သဘောမတူ… ။
ကျွန်တော် တွေ့ရှိထားတဲ့ အချက် ရှိလို့ပါ။
ကျွန်တော့် တွေ့ရှိချက်နဲ့… သူ့ တွေ့ရှိချက်က … ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေလို့ပါ.. ။
ကျွန်တော် တွေ့ရှိလိုက်တာကတော့ ..
” ယောကျာ်းတွေ အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင်… မိန်းမတွေနဲ့ များများ ထိတွေ့ပတ်သက်ပါ ”
.ယောကျာ်းတွေအတွက် အသက်ရှည်နည်း လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပါ။
ကျွန်တော်တို့ ယောကျာ်းတွေရဲ့ ဘဝမှာ.. ကိုယ် ရင်ခုန်တပ်မက်ရတဲ့ မိန်းမသားတွေနဲ့ အနေနီးကပ်စွာ..လက်ပွန်းတတီးနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ..
အဲဒီ မိန်းမက ပေးလာမယ့် အကြင်နာတွေ… ဂရုတစိုက် ယုယမှုတွေ … မိန်းမသားတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအစုအယုအယတွေဆိုတာ…
အင်မတန်မှကို စိတ်လက် ကြည်သာစရာ ဖြစ်ပါတယ်။
.ယောကျာ်းတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဗေလုဝ ကို ထိုင်ကြည့်မလား.. ခင်ဝင့်ဝါ ကို ထိုင်ကြည့်မလား…လို့ မေးရင်..
.ယောကျာ်းချင်းချင်း.. ဗေလုဝကို ဘယ်လာ ထိုင်ကြည့်ချင်မလဲ.. .
ခင်ဝင်ဝါလေးကို ထိုင်ကြည့်ရတာနဲ့… ဗေလုဝကို ယောကျာ်းချင်းချင်း ထိုင်ကြည့်ရတာနဲ့ ဘယ်ဟာက..ပိုပြီး.ကိုယ့်ကို ရင်ခုန်စေမလဲ…
သာယာ ကြည်နူးမှု ဘယ်သူကပေးမလဲ…
( မိန်းမတွေရဲ့ ဓါတ်သဘောက ယောကျာ်းတွေအတွက် ရွှင်မြူးတက်ကြွစေတယ်.. ရန်ခုန်လှုပ်ရှားစေတယ်ဆိုတဲ့ သဘော ရှိကြောင်း.. မယုံရင်… ဒီထက်ပို အသေးစိတ် သိချင်ရင်.. ဦးကြောင်ကြီးကိုလည်း မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဦးကြောင်ကြီးခင်ဗျား.. ဒီအချက်ကို ကူပြီး ရှင်းလင်း ပြသပေးစေလိုပါတယ်။ )
ခင်ဝင့်ဝါလေးက… ယောကျာ်းတွေအတွက် အသက်ရှည်ဆေးပါ။
ခင်ဝင့်ဝါလိုပါပဲ… .. မိန်းမဆိုတဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေဟာ… ယောကျာ်းတွေအတွက် အသက်ရှည်ဆေးပါ။
”ကိုယ်ထင်ရင် ဒေါ်ဖွားမေကိုတောင် ခင်ဝင့်ဝါ ထင် ”ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိသားပဲ.. ။
(အမှန်က ”ကိုယ်ထင် ကုတင်ရွှေနန်း” ဆိုတာပဲ ရှိတာ ။ အခု စကားက အခုမှ ကျွန်တော် ထွင်လိုက်တာ )
ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင်… ခင်ဝင့်ဝါလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ များများ ထိတွေ့ ပတ်သက်ရပါ့မယ်။
ခင်ဝင့်ဝါလောက် မရနိုင်လည်း / ခင်ဝင့်ဝါလောက် မလှရှာတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဒေါ်ဖွားမေတွေကို အထင်နဲ့ ကုတင်ရွှေနန်းလို့ မြင်ပြီး..ခင်ဝင့်ဝါ အမှတ်နဲ့ ပတ်သက်ရမှာပါပဲ။
မိန်းမတွေရဲ့ မိန်းမဆန်မှုဟာ…. ယောကျာ်းတွေအတွက်တော့… လိုအပ်တဲ့ အသက်ရှည်စေမှုတစ်ခုပါ။
အဲဒီလို ကျွန်တော် တွေ့ရှိထားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ယောကျာ်းတွေ အနေနဲ့ …မိန်းမတွေနဲ့ များများ ထိတွေ့ဆက်ဆံလေ…အသက်ရှည်လေပဲ..ဆိုလို့…
ဟောတစ်ယောက် ဟောတစ်ယောက်နဲ့…ထင်တိုင်း ကြဲနေလို့တော့မဖြစ်ပါဘူး ။
ကိုယ် ချစ်မြတ်နိုးတွယ်တာရသူ မိန်းကလေးတွေကို သစ္စာ ရှိရပါဦးမယ်။
ဒေါ်ဖွားမေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခင်ဝင့်ဝါပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဆိုတာ …ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ယောကျာ်းကို …သစ္စာရှိစေချင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာများတဲ့ ယောကျာ်းတွေကို… ချစ်ရတာ..သူတို့လေးတွေ…စိတ်ပင်ပန်းရှာမပေါ့… ။ သာမီးလေးတွေ သနားပါတယ်။
ဒါကြောင့်… ကျွန်တော်တို့ ယောကျာ်းတွေဟာ..သစ္စာရှိရပါမယ်။
ပြောသာပြောရတယ်.. ။ အမှန်တော့… ကျွန်တော်တို့ ယောကျာ်းတွေ သစ္စာ ရှိတာများပါတယ်။
တော်တော်များများသော ယောကျာ်းတွေက သစ္စာ ရှိကြပါတယ်။
ယောကျာ်းတွေ ဘယ်လောက် သစ္စာ ရှိတယ်ဆိုတာ..ယောကျာ်းတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က ကောင်းကောင်း သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပါ။ ကျွန်တော့် သစ္စာ ရှိခြင်းက ဒီလိုပါ။
ကျွန်တော် အသက် ၁၆ နှစ်လောက်ကဆိုရင်.. ကျွန်တော်ဟာ..၁၆ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတွေကို ရင်ခုန်ပြီး..ရည်းစားအဖြစ်ထားချင်ခဲ့ပါတယ်။
အခု ကျွန်တော် အသက် ၂၇ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သစ္စာ မဖောက်ပါဘူး ။ ၁၆ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတွေကိုပဲ.. ရည်းစားအဖြစ် ထားချင်တုန်းပါပဲ။
ကျွန်တော် အသက် ၄၀ လောက် ဖြစ်သွားချိန်မှာလည်း…၁၆ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတွေကိုပဲ… ရည်းစားအဖြစ် ထားချင်ဦးမှာပါ။
သေချာပါတယ်..အသက် ၆၀ ကျော်သွားရင်တောင်… အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတွေကိုပဲ… ရည်းစား အဖြစ် ထားချင်မှာပါ ။
အဲဒီလို သစ္စာ ရှိပါတယ်။ ယောကျာ်းတွေ သစ္စာ ရှိပါတယ်။
အသက်ရှည်ဖို့…. မိန်းမတွေနဲ့ များများ ထိတွေ့ ပတ်သက်ကြပါစို့လို့…တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
ဇန္နဝါရီလ ၊ ၂၆ ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
နာပဲ ဖတ်တာမှားနေလား….၊ မှတ်မှတ်ရရသတိထားမိတာဆိုလို့…လက်လက်ဆင်တစ်ယောက် ခင်ဝင့်ဝါကို မရလို့…ဒေါ်ဖွားမေကို တစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာနဲ့…သူ ၁၆ နှစ်ကောင်မလေးနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်း ကြော်ငြာသွားတာတော့ သတိထားမိတယ်…။
နီ ၁၆ နှစ်ကောင်မလေးနဲ့ ရဲဇားဖြစ်ဖို့ ၁၃ နှစ်ကောင်မလေးအရွယ်ကတည်းက ကြိုပွှိုင့်ယူထားမှ ဖြစ်မယ်…။ ကလေးတွေက လူကြီးတွေထက်တောင် ဖလန်းနေသေးတယ်…။ ဒီတော့…ဒေါ်ဖွားမေကိုသာ သေတ္တာရှိ အဲ့ သစ္စာရှိလိုက်ပါတော့ဟယ်….
ကိုယ်ထင်ရင် ဒေါ်ဖွားမေတောင် ခင်ဝင့်ဝါလို့ ထင်… ပါဆို..
မရတဲ့ အဆုံးကျရင်..ဒေါ်ဖွားမေဘက် လှည့် ရမှာပဲ…
(အသက်ရှည်ဖို့…. မိန်းမတွေနဲ့ များများ ထိတွေ့ ပတ်သက်ကြပါစို့လို့…တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒီစာသား အဲလိုလေးကို ပရင့်ထုတ် ပလပ်စတစ်လောင်းပြီး အိတ်ထဲဆောင်ကာ စင်တင်တွေ ကာရာအိုကေတွေ ဟိုဟိုဒီဒီအိုကေတွေ သွားလို့ရပြီ။ အရေးကြုံရင် အဲလိုဆောင်ပုဒ်ကြောင့်ပါပေါ့ ထုတ်ပြလိုက်ရုံပါဘဲ
ဇွတ်အောင်ရဲလင်းရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို သိရှိသွားပါပြီကွယ်
ငမ်းးးးးးးးး ယောက္ခမ …တိတွားဘီ…..
ဟီ ဟိ… ” ယောက်ျားတွေ အသက်ရှည်ရှည်နေချင်ရင်…
မိန်းမတွေနဲ့ များများ ထိတွေ့ပတ်သက်ပါ ” … တဲ့
ဟိုး ရှေးရှေးက ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဘယ်သွားထားမလဲ…
ကိုကိုဝီကိုတော့ စိတ်မဝင်စား … အကုသိုလ်များလို့…
ကိုကိုဝီကတော့ အသက်တိုမှာ ကျိန်းသေသလောက်ပဲ..ဟီဟိ။
ဟိုမာတုဂါမကြီးကို..ဟှဒင်းဆိုပြီး ပြောပုံထောက်ရင်.. သူက… ဟှဒင်းတွေနဲ့ တကယ်ကင်းကင်း ပြတ်ပြတ်နေမယ့်ပုံ…
အဲလေ… အဲ့ နီညို ခြုံကိုယ်တော်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့… မပြောချဉ်ပေါင်
သူ့မှာ.. အချက်အလက်ထက်.. စိတ်ဆန္ဒဦးစားပေးတာရှိနေမှာပါ..
အဲဒါကတော့.. Fact အချက်အလက်ပါ…။
ကြည့်ရတာ အဲ့ဘွားတော်က..ယောကျာ်းတွေကို စိတ်နာနေပုံရတယ်..
နှစ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု၊ဆေးပညာအဖွဲ့ မှဆိုသည်၊ရည်မှန်းချက်အတွက်၊လှုံ့ ဆော်နေသော၊ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်
ဗဟုသုတ ကွန်မန့်အတွက် ..ကျေးဇူး အထူး….အန်တီ
မင်းက လူ ကို သစ္စာရှိဖို့ ထက် အသက် ကို သစ္စာရှိ ပြ နေတာကိုများ။
မိန်းမ များများ နဲ့ ထိတွေ့ လွန်းရင်လဲ အေကိုက်ပြီး အသက်တို နေမှာကိုလဲ တွေးပါဦးတော့လား။
ကျနော့်လို သစ္စာ ရှိသော ယောကျာ်းများ.. မိုးရွာထဲ… ခေါင်းဆောင်း မပါပဲတော့…လမ်းမလျှောက်စေလို…